मध्यरातमा सलमानको घरमा किन पुगे रेमो? « Khabarhub
मध्यरातमा सलमानको घरमा किन पुगे रेमो?
मुम्बई – बलिउडमा सलमान खानसँग कुनै पनि फिल्ममेकरले सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन् । यता सलमान पनि सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । पछिल्लो दिन फिल्म ‘रेस ३’ का दौरान सलमान खान र निर्देशक रेमो डिसुजाको सम्बन्ध चिसिएको थियो । फिल्मका केही दृश्यलाई लिएर यी दुईबीच मतभेद पनि थियो । यो फिल्म बक्स अफिसमा पनि राम्रोसँग चलेन ।
अहिले भने रेमो डिसुजा र सलमान खान नजिकिएको चर्चा छ । सलमानको अपकमिङ फिल्म ‘भारत’ र रेमो डिसुजाको फिल्म ‘स्ट्रीट डान्सर’ को सेट मुम्बईस्थित फिल्मसिटीमै छ । भारतीय मिडियाले रेमो डिसुजा आफ्नो फिल्मको शूटिङबाट समय निकालेर ‘भारत’ फिल्मको छायांकनमा पुगेका थिए । तर, सलमान खान भने एक दृश्यको शूटिङमा निकै व्यस्त थिए । जसकारण उनी रेमोसँग भेट गर्न पाएनन् ।
तर, सलमान खानले भने रेमोलाई राति घर आउने निम्ता दिए ।
त्यसपछि रेमो सलमानको घर पुगे, त्यो पनि राति साढे ३ बजे । रेमोले फिल्म ‘रेस ३’ मा बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार्न चाहेको भारतीय मिडियाले लेखेका छन् । यसैकारण रेमोले पुराना कुरा भुलाएर नयाँ सम्बन्ध बनाउन खोजिरहेका छन् ।
यतिबेला सलमान खानले आफ्नो पूरै समय फिल्म ‘भारत’ का लागि छुट्याएका छन् । केही समय पहिले यो फिल्मको टिजर सार्वजनिक भएको थियो । उक्त टिजरबाट फ्यानले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । यो फिल्ममा सलमानसँगै क्याटरिना कैफ पनि देखिनेछिन् ।
प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७५, आइतबार ५ : ०० बजे